La kulan tiro aad u tiro badan oo ah walxaha isku dhaca.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery La kulan tiro aad u tiro badan oo ah walxaha isku dhaca
La kulan tiro aad u tiro badan oo ka mid ah walxaha isku dhaca ee is weydaarsiga ah OST file
Waxaad lakulmaysaa tiro badan oo ah walxaha isku dhaca galka khad la'aanta ah (.ost) faylka.
Khaladkan micnihiisu waa adiga OST faylka ayaa kharribmay ama dhaawacmay.
Si loo xaliyo qaladkan oo looga hortago luminta xogta, fadlan raac talaabooyinka hoose:
Xidh Microsoft Outlook iyo barnaamijyada kale ee laga yaabo inay galaan OST gudbiso.
Kabsado xogta offline ee OST gudbiso. The OST Faylka waxaa ku jira xog qadla'aan ah, oo ay ku jiraan emayllada iyo dhammaan waxyaabaha kale, ee ku jira sanduuqaaga Beddelka, oo ka mid ah most muhiimadda ay kuu leedahay. Si loo badbaadiyo xogtan, waa inaad isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loo baaro musuqmaasuqa OST faylka, soo kabso xogta ku jirta, ka dibna ku keydi faylka PST-ka ee 'Outlook PST' qalad la'aan si aad si fudud oo hufan ugu heli karto dhammaan emayllada iyo walxaha ku jira Muuqaalka.
Hagaaji qaladka. Hubso in goobaha xisaabta Exchange Exchange ee Muuqaalka ay sax yihiin, oo Muuqaalka ayaa si guul leh ugu xirmi kara server-kaaga Exchange. Kadib restart Muuqaalka oo dir ama ku soo dir e-mayladaada sanduuqa isweydaarsiga isweydaarsiga, taas oo ka dhigi doonta Muuqaalka mid cusub OST si toos ah u fayl garayso isla markaana ku lifaaq xogteeda sanduuqa boostada ee serverka sarrifka ah.Haddii qaabkani aanu shaqeyn, markaa cinwaankaaga imika uu khaldanyahay, waa inaad tirtirtaa oo aad mid cusub abuurtaa, sida soo socota:
Soo dejiso xogta lagu soo celiyey tallaabada 3. Kadib OST dhibaatada faylka waa la xaliyay, sii cusub OST faylka loogu talagalay sanduuqa isweydaarsiga ee furan, ka dibna fur faylka PST ee lagu sameeyay tallaabada 3 oo leh Muuqaalka. Maaddaama ay ku jirto dhammaan xogta la soo kabsaday ee asalkaaga ah OST faylka, waad nuqulan kartaa waxyaabaha loo baahan yahay si aad u cusub OST gudbiso.